In daawo loo soo qaado qof kale • E-hälsomyndigheten
In daawo loo soo qaado qof kale
Adiga qof kale daawo usoo qaada ama adiga qof kale oggolaansho usiinaya in uu daawadaada kuu soo qaado.
In qof la wakiisho
Qof kale xaq waad usiin kartaa oo waad u oggolaan kartaa in uu daawo kuu soo qaado (oo uu farmashiiyaha kaaga soo qaado). Waxaa loogu yeeraa in qof la wakiisho. Adiga wakiishanaya waxaa loogu yeeraa wakiil laga noqde, adiga la wakiilanayo waxaa loogu yeeraa wakiil (loo wakiishade).
laga bilaabo 1 bisha juun 2020 waxaa la hirgelinayaa maareyn cusub oo saameyneysa wakiilashada loo baahan yahay si qof kale farmashiiyaha daawo looga soo qaado. Ujeeddadu isbedelka waa in sare loo qaado ilaalinta ammaanka bukaanka iyo in la xoojiyo xafididda macluumaadka shakhsiyeed.
Sidaan ayey arrintaas kuu saameyneysaa
Laga billaabo 1 bisha juun 2020:
Waxey oggolaabsho wakiilasho jiri kartaa ugu badnaan afar sano
waxaad u baahantahay in aad oggolaanshahaaga dhiibtid isla markaana aad diiwaangelisid macluumaadka shakhsiyeed, hadii aad tahay wakiil laga noqde iyo wakiil labadada.
Waqtiga jiritaanka wakiilashada wuxuu ka billaabanayaa marka adiga ah wakiilka aad gudbisid oggolaanshahaaga. Haddii aad hore u gudbisay oggolaansho marka la bedelayo maareynta wakiilashada, wuxuu waqtiga jiritaanka oggolaanshaha ka billaabanayaa 1 bisha juun 2020.
Laga billaabo 1 bisha juun 2020 waxaa la hirgelinayaa maareyn cusub oo saameyn ku yeelaneysa wakiilashada loo baahan yahay si qof kale farmashiiyaha daawo looga soo qaado. Sida uu dhigayo sharciga xejinta macluumaadka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan (GDPR) waxaad u baahantahay in aad dhiibtaa oggolaansho marka la diiwaan gelinayo macluumaad shakhsiyeed haddii aad tahay wakiil laga noqde iyo haddii aad tahay wakiil (lo wakiishade). Haddii aad tahay wakiil waxaa lagaaga baahan yahay in aad oggolaanshahaaga dhiibtaa toddobo maalin gudahood laga billaabo marka la diiwaan geliyo wakiilasho cusub ama ugu dambeyn 31 bisha janawari 2021 haddii wakiilashada ey redan ugu diiwaangashantahay marka uu billowdo in maareynta wakiilashada cusub uu shaqeeyo, haddii kale waa la xirayaa wakiilashada.
Qaab dijitaal ah u diiwaangeli wakiilasho una dhiib oggolaansho
Qaab dijitaal ah qof kale waad ugu diiwaangelin kartaa wakiilasho waana ugu gudin kartaa oggolaansho iyadoo loo marayo adeegga Läkemedelskollen.
Diiwaan geli wakiilasho oo gudbi oggolaansho adigoo umaraya Läkemedelskollen
(Adeegga wuxuu ku qoran yahay luqadda iswiidhishka oo kaliyah)
Waxaad waxyaabahaan oo dhan ka sameysan kartaa adiga oo booqanaya bogga 1177.se kadibna waxaad gujineysaa leenka adeegga daawooyinka (läkemedelstjänster).
Warbixinta waxey ku qorantahay luqadda iswiidhishka oo kaliya.
Adeegga waxaa laga helayaa farmashiiyayaasha oo dhan.
Diiwaan geli wakiilasho oo gudbi oggolaansho adiga oo luqadda af engilishka isticmaalaya
Haddii aad dooneysid in aad luqadda af engilishka ku diiwaangelisid wakiilasho waxaad isticmaali kartaa foom.
Diiwaan geli wakiilasho oo gudbi oggolaansho adiga oo isticmaalaya foom luqqadda af engilishka ku qoran
Su'aalo ma qabtaa? La xiriir Hey'adda caafimaadka ee (E-hälsomyndigheten)
Taleefan: 0771-766 200
Ku saabsan wakiilasho luqadda af iswiidhishka ku qoran